प्राइभेसी पोलिसी - loveofqueen
1। हामी जानकारी सङ्कलन गर्दछौं
2। जानकारी को प्रयोग
यो साइटलाई एकपटक भन्दा बढी जानकारी प्रविष्ट गर्न नसक्दा प्रयोग गर्न को लागी सहयोग गर्न मद्दत गर्नुहोस्।
तपाईंलाई छिट्टै जानकारी, उत्पादनहरू, र सेवाहरू फेला पार्न मद्दत गर्नुहोस्।
हामीलाई यस साइटमा सामग्री सिर्जना गर्ने मद्दत गर्नुहोस् जुन तपाइँको लागि सबैभन्दा सान्दर्भिक छ।
तपाईलाई नयाँ प्रस्ताव, उत्पादनहरू, र सेवाहरू प्रदान गर्नुहोला।
दर्ता र आदेश:
दर्ताको बेला, तपाईंलाई तपाईंको नाम, ढुवानी र बिलिङ ठेगाना, फोन नम्बर, इ-मेल ठेगाना र क्रेडिट कार्ड नम्बर प्रदान गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। साथै, हामी तपाइँलाई पनि तपाइँको देशको लागि सोध्न सक्छौं ताकि हामी लागू कानुन र नियमहरू पालन गर्न सक्छौं। यी प्रकारको व्यक्तिगत जानकारी बिलिङ उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ, तपाईंको अर्डर पूरा गर्न तपाईंको आदेश र हाम्रो साइटको बारेमा, र आन्तरिक मार्केटिङ उद्देश्यका लागि संवाद गर्न। यदि तपाईंको अर्डर प्रशोधन गर्दा हामी समस्याको सामना गर्छौं, हामी तपाइँलाई सम्पर्क गर्न तपाईलाई व्यक्तिगत जानकारी प्रयोग गर्न सक्दछौं।
तपाईंलाई हाम्रो साथ अर्डर राख्न र निःशुल्क प्रोमोशनल सूचनाहरू प्राप्त गर्न खाता दर्ता गर्न आवश्यक छ। हामीले नयाँ ब्रान्ड पाउँदा हामी सूचित गर्नेछौं, वा नयाँ उत्पाद शैलीहरू तपाइँले हाम्रो ई-मेल न्यूजलेटरको लागि साइन अप गर्नुपर्छ। प्रतियोगितामा तपाईंको सहभागिता पूर्णतया स्वैच्छिक छ, र तपाइँले हामीसँग सान्दर्भिक जानकारी को भाग लिन र खुलासा गर्न चाहे छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
3। गोपनीयता सुरक्षा
हामी नियमित रूपमा हाम्रो नियमित पाठ्यक्रमको भागको रूपमा अन्य कम्पनीहरूमा (वा व्यापार वा भाडा) व्यक्तिगत रूपमा पहिचान योग्य जानकारी बेचन गर्नुहुँदैन। हामी नवीनतम एन्क्रिप्शन टेक्नोलोजीमा प्रयोग गर्दछौं, र हाम्रा सबै कर्मचारीहरूले गोपनीय सम्झौता सम्झौता गर्छन् जुन तिनीहरूलाई व्यक्तिगत व्यक्ति-सम्बन्धित जानकारी अन्य व्यक्तित्व वा संस्थाहरूमा खुलासा गर्नबाट रोक्न अस्वीकार गर्छन्।
ग्राहकलाई तपाई कुन किसिमको इमेल पठाउनुहुन्छ?
हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई ईमेल सामग्री पठाउँछौं जुन निम्न समावेश हुन सक्छ:
अर्डर सूचना, भुक्तानी पुष्टिकरण, ढुवानी अधिसूचना, अर्डर प्रसोधन अद्यावधिकहरू, साप्ताहिक डीलहरू, विशेष प्रमोशनहरू, र गतिविधिहरूमा सामेल र दिइएका सामेलहरू पनि समावेश गर्दछ।
म कसरी सदस्यता समाप्त गर्न सक्छु?
तपाईं कुनैपनि समयमा कुनै पनि इमेल न्यूजलेटरको तल लिंक लिङ्क प्रयोग गरेर सदस्यता हटाउन सक्नुहुन्छ।
नोट:खाता दर्ता गरे पछि, तपाइँले हाम्रो साप्ताहिक न्यूजलेटरहरू विशेष विशेष सौदों, विशेष छुटहरू, निःशुल्क कूपनहरू, र तीमा प्रमोशनहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्नुहुनेछ।